Fahalalahàna miteny · Jona, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Jona, 2011
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Jona, 2011
Syria: Fahatapahan'ny Aterineto?
Mirongatra ao amin'ny Twitter ny filazana fa mety misy fahatapahana ankapobeny ny aterineto manerana an'i Syria androany (Zoma). Manohy ny fihetsiketsehana hatrany ny Syriana manohitra ny fitondran'i Al Assad sy ny habibiana ataony amin'ny Syriana. Natao ny fihetsiketsehana Zoma hanamelohana ny fanafihana natao tamin'ireo zaza Syriana. Ny sasany milaza ny...